Alaziwa ishibhi ‘elalivakashelwa’ yisikhulu sakwa-Eskom endaweni yamaGupta | News24
Alaziwa ishibhi ‘elalivakashelwa’ yisikhulu sakwa-Eskom endaweni yamaGupta
Johannesburg – Sekuqubuke imibuzo ngendawo yokucima ukoma iCEO yakwa-Eskom, uBrian Molefe, athe kungenzeka ukuthi wayehlale eya kuyona ngenkathi ephendula imibuzo ngezinsolo zokuthi wayengapheli emzini womndeni oyiziqumama, nosolwa ngokulawula umbuso, abakwaGupta.
Lokhu kulandela umbiko obubhekwe ngabomvu woMvikeli woMphakathi osephumile, uThuli Madonsela, mayelana nezinsolo zokuthi lo mndeni ongabangani noMengameli Jacob Zuma, ubambe ngobhongwane umbuso okuhlanganisa nokuziqokela oNgqongqoshe kanye nezinye izikhulu zikahulumeni ezikhundleni.
Ubufakazi obuqukethwe kulo mbiko bukhombisa ukuthi uMolefe kanye no-Ajay Gupta, okunguyena omdala kumadodana akwaGupta, bafonelana izikhathi ezingu-58 phakathi kwa- Agasti 2015 kuya kuMashi 2016.
Amarekhodi efoni aqukethwe kulo mbiko akhombisa ukuthi uMolefe kuphakathi kokuthi wayeseduze nendawo yamaGupta, eSaxonwold, eJohannesburg, okukanye wayekhona qobo emzini wamaGupta. Lokhu kwenzeka izikhathi ezingu-19 phakathi kwamhlaka-5 ku-Agasti kuya kumhlaka-17 Novemba kunyaka ka-2015.
NgoLwesine uMolefe ukhale mi izinyembezi ngenkathi ephika lezi zinsolo, ehlaba nalo mbiko.
Ngokwakhe uMolefe, ukuba seSaxonwold ukusho ukuthi wayesemzini wamaGupta, wathi futhi kuneshibhi kule ndawo, noma engeke avume noma aphike ukuthi wayeye eshibhini.
Kodwa-ke lokhu kuyashayisana nalokhu okushiwo nguSihlalo weSaxonwold and Parkwood Residents Association, uTessa Turvey, otshele iNews24 ukuthi uyazi yonke imigwaqo yakule ndawo, futhi ukuba likhona ubengeke angazi.
Uthi uma likhona kusho ukuthi alivulelekile emphakathini nokuthi alibonakali uma usemgwaqeni.
“Singabonga uma uMnumzane Molefe engasitshela ikheli laleli shibi ngoba uma likhona kumele ukuba alikho emthethweni ngakho kumele livalwe,” kusho uTurvey.